दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुने व्यक्तिको यस्तो भविष्य हुन्छ ! Weekly Nepal
दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुने व्यक्तिको यस्तो भविष्य हुन्छ !
April 18th, 2017 | by Weekly Nepal
काठमाडौं । सामुन्द्रिक शास्त्र एउटा विस्तृत विधा हो। यसमा व्यक्तिको अनुहार, शरिरको अलग अलग अंगको आंकलन गरेर व्यक्तिको स्वभाव चरित्र अनि व्यक्तित्वको पत्ता लगाइन्छ।
सामुन्द्रिक शास्त्रको अनुसार दाँतको बिचमा ग्याप हुने व्यक्ति यस्ता हुन्छन् -;
सामान्यतया दातँको बिचमा यदि ग्याप छ भने यसले मुस्कानलाई नै फिका बनाइदिन्छ। यसैलै सुन्दरताको दृष्टिले यो सहि मानिदैन। तर ज्योतीषीय दृष्टिकोणमा व्यक्तिको दाँतको आकार समान हुनुको साथसाथ चमक पनि हुन्छ, उनीहरुले निकै सुखको जीवन व्यतीत गर्छन्।
मिलेको दाँत भएका व्यक्तिको रचनात्मक क्षमता पनि गजबको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले पैसा पनि निलै सम्हालेर राख्न जानेका हुन्छन्। त्यस्तै अगाडीका दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुनुलाई सामुद्रिक शास्त्रले बुद्धिमताको निशानी मानेको छ।
जो व्यक्तिको अगाडीको दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुन्छ ती व्यक्तिको भित्र निकै उर्जा हुन्छ अनि जीवनमा एक ठुलो लक्ष हासिल गर्ने र सजिलै हार मान्दैनन्। खुसी रहन जान्ने हुन्छन् त्यसैले अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दा आत्तिने पनि गर्दैनन्।
सामुन्द्रिक शास्त्रको अनुसार दाँतको बिचमा खाली ठाउँ हुने व्यक्ति निकै बोलक्कड हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति बिना कुनै बिषय बिहान देखि बेलुकी सम्म कुरै मात्र गरिरहन सक्छन्। यस्ता व्यक्ति खुला विचारवाला पनि हुन्छन् अनि साथी पनि छिट्टै बनाउँछन्।
सामुन्द्रीक शास्त्रको अनुसार दाँतको बिचमा ग्याप हुने स्त्रीले राजसी सुख भोग्छिन्। दाँतको बिचमा ग्याप हुने व्यक्तिहरु खाना-पिनाको निकै शौखिन हुन्छन्।
जो स्त्रीको माथी र तल १६-१६ दाँत हुन्छन् ती स्त्रीले पतिको निकै प्रेम पाउँछन्। जो पुरुषको लामो दाँत हुन्छ, ती पुरुषला जीवनमा कहिल्यै धनको कमीको सामना गर्नु पर्दैन।